Fariimo Jaceyl Caloosha Ka Soo Ridaya : Si Qarsoodi Ah Ayaad U Xaday Qeybkasta Oo Qalbigeyga Ah | alcarabiya.com
Home » Fariimo Jaceyl » Fariimo Jaceyl Caloosha Ka Soo Ridaya : Si Qarsoodi Ah Ayaad U Xaday Qeybkasta Oo Qalbigeyga Ah
Fariimo Jaceyl Caloosha Ka Soo Ridaya : Si Qarsoodi Ah Ayaad U Xaday Qeybkasta Oo Qalbigeyga Ah	* Si qarsoodi ah ayaad u xaday qeybkasta oo qalbigeyga ka mid ah adigoo aan igala tashan,haseyeeshee nasiibdaro waxaa iiga sii xanuun badan adigoon soo dhameystiran isku keenida qeybtii ka dhineyd qalbiga inaad ilowday.
* Kelmada waan ku jeclahay markaad ii timid ee aad igu tiri,ma aqaano wixii igu dhacay,jaceylkaaga la’aantiis waan lunsanaa, waxaan dareemay erey walboo aad i dhahday, Jaceylkaaga waa waxa ugu macaan ee nolosheyda soo maraya intii aan noolaa.
* Waan jeclahay wax walbo oo dhankaaga ka yimaado, xiisaha fariimaheena jaceylkana waxa ay sal xoogan u yeelayaan jaceylka ugubka ah ee aragtida ku koraya.
* Waxaad Qalbigeyga ka sameysatay mudul salkiisu adag yahay,hadana ay ka buuxaan xiiso,farxad iyo ififaalada hami nolol cusub.
Ma ogtahay qalbigeygoow in naftu aaney ogoleyn iney qanacdo hadii ay kaa weyso hawada ay ku neefsaneyso,i aamin olol caashaq iyo iftiin la’aan ayaa ku suganahay.
Waxaan kuu caashaqay xad ka balaaran inta aadan oogaan karin xaqiiqduna aan qiyaastaas u gaarayna waxey tahay burhaantaada ayaa maalinkasta siisa iftiin gaara ah oo qalbigeyga ka dhex shidan.
Ma ogtahay nafteydoow in holaca qalbigeyga ka shidan qofka keliya ee demin kara inaad adigu tahay. Mase la socotaa in codkaagu uu ii furo sameecadaha maqalka dhagaheyga.
Maalin kale ayaa i dhaaftay anigoo aanan dheehaneyn dhoolaceyntaadii quruxda badneynd ee waaberi kasto aan ku indha doogsan jiray. Waa dareen xanuun badan inaad ku fekerto qofkii aad aadka u jecleyd ee hadana kaa fog,qalbiguna guux iyo guhaad kaama daayo.
Xabiibi wadnaheyga adiga ayaan ku siiyey,maadaama adiga uu kuu garaacmana ma awoodo inaan xakameyn , daqiiqad codkaaga maqlo farxada iyo yididiilo ayaa hareysa qalbigan kuu ooman ee adigu aad hogaanka u heyso.	Jaceylka dhan dunida yaal waxey soo wada degeen qalbigeyga,waxaana dareensahay cabsi iyo hadana farxad uu xishoon humaag gelinaayo. Ma ogtahay nafteydoow maalinta aan kulanay iney ii tahay bishaaro aan ebedkey iloobi doonin, waa maalintii indhaheyga iyo wadnaheyga ku qanceen dhoolacadeyntaada iyo kaftan macaanidaada. Waa maalintii ay gacanteyda ka baxday xakameynta nafteyda.
Aniga la’aantaa waxaan ahay keli, alcarabiya ayaad ka soo xaday fariimahaan. farxadeenana waxey ku jirtaa inaan wada joogno,iigu noqo saafi sida shaatiga cad uu nadiif u yahay.
Marwalbo oo aan indhaha isku xero waan xusuusnaan doonaa daqiiqadahaa, fadlan u ogolaaw riyadaan iney noqoto mid rumowdo oo aan baa’bi in.
Xitaa hawada aan ku neefsaneyso waan ka jeclahay dunida inteeda kale,mana qiyaasi kartid siduu ii damqineyso fikrada kala maqaanshaheen.
Aan noqon kuwa isku duuban oo leh hal hadaf iyo hal riyo iney ku noolaadaan.
Facebook Kala Xariir Halkaan Fiiro gaar: Waxaan u hibeeyey qormadaan dhamaan mucaashaqiinta alcarabiya.com Ciid wanaagsan.
18 Responses to Fariimo Jaceyl Caloosha Ka Soo Ridaya : Si Qarsoodi Ah Ayaad U Xaday Qeybkasta Oo Qalbigeyga Ah	Abdullahi Eyman Reply
September 20, 2013 at 4:52 pm	Thanks fardowsa
August 18, 2013 at 4:50 am	Qof waliba oo dunida jooga waxan uguduceyna in uu jaceylkisa helo
August 22, 2013 at 9:55 pm	amiin, uuna lajeclaha u ogyahey…………
ismaaciil neero Reply
August 16, 2013 at 12:17 pm	Aad iyo Aaad ban ugu farxay qof walba ohela jacaylkiisa iam verry happy to that love idea
Teeda aniga xitaa gabar aan is ku barany walaaltinimo ayaan jeclaaday kadib gabadhii way iga diiday anna uma bixin mudo kabacdii waxan nasiib uyeeshay inaan teleefan kashukaansado gabar kale markaas ayay igu tiri walaal waxan kahelaaa markaad ila hadasho waayo waxaad tahay aftahan wan lakulmay waxay noqotay gabar aan iiga fogayn xaafadeeda kabacdii wan isjeclaanaay kulankeenii muuqaalka maadaama aan awal isku fahanay kulankeenii maqalka hada waxaaba ii timid taan horay isu khillfnay waxayna had iyo jeer ileedahay wan kujeclahay sms xitaa way isoo dirtaa saqda dhexe saxiib anna ma ilaawi karo gabadhan wada jirka noqonay tanna way igu dul calaacalaysaa talaan ubaahnahay iigu soodir canjab2004@mail.com
August 14, 2013 at 2:37 am	asc dhaman walalaha an jeclahay bacda taxiyah allah ayey mahad u sugnatay .bahda alcarabiya o jacel marwalba in ay qancsi dadka u jacelka lafaha ka galay sida aniga o kali ma daremayo sakin ama dab hadi an jirkeyga ku ciqabayo marka an xasusto qalida an dunida ugu jeclan dono .talo ayan donaya ayada wey i jeceshahay ani kaba daran gur ayey iga codsatay waqtiga o ad u xun samir ban iri ada aya ileh .sadaxeye la donayo qofkali aya ina so dhex galay ma rufyan kan dila misa kan lala rabo misa ana is dilo wlhi wadnaheyga uma dulqadan karo xanun ka aya ka danbadan qilaf xun aya ina dhexyala maxan sameya kama marme wan jeclahay si walba wax wan ugu shegay bahda alcarabiya talo wa ti alle talo ayan idin ka donaya igu sodira ciwan keyga o ah cmahad64@gmail.com thnkz halis ban ku suganahay
August 12, 2013 at 8:56 pm	Fardowsa, Thanks
August 12, 2013 at 10:07 am	Siilka hooyada was
Xaaji mohamed haashi Reply
August 12, 2013 at 4:46 am	Asc dhamaantin walyal wa iidan salamy marka hore tan labad waxan ahy wiil wax jcyl malin malmhaa ka mid ayaa gabr isowacay nambrkga waxy igu tri wa gabr ku jcyl ee ila qabo wn laqabty marks mudo 3 bilod ayn waday marks an dhahy an ku arko marks aye dhahday wxan jogta nayrobi wan iimana insha alllha wey imaty hdana wey labaty anoo arkin <3 <3 ayan ku tashay inan iska dayo jcylkeda an usamro ayda wn jclahay aye ku haysa taala iisiya wlalayaa all
August 10, 2013 at 1:43 pm	Mansha alah walahi wu icajab galiyey fardowso farinteda
salah mayow Reply
August 10, 2013 at 1:07 pm	marka hore salaan qaali ah. Bahda alcarabiya .qof jaceylkis ka d
hintey maxa u daawo ah
Hanad shicinbir Reply
August 12, 2013 at 5:20 am	Wllyal jwbta ma lisiyo
Cabdi qani Reply
August 10, 2013 at 8:48 am	Maasha allah mahadsanid abaayo
By C/raxman yare Reply
August 10, 2013 at 7:18 am	Xaaaaax alla firdowso waya yacda igu kacday bis iga dheh
August 10, 2013 at 7:14 am	Kkkk waah cid wangsan bahda alcrbya gar ahan firdowsa waxan karajaynayna intas & in kasi badan o ah frimaha jaceylka xaaaaaaaaaaaaaaaax xadaaaaa ikacday
August 12, 2013 at 4:35 am	K.k.k.k.k. Wa jira jcylka yarta cdi mhan
Jabra qalbi Reply
August 9, 2013 at 12:16 pm	Stupid!!! waah waah waxasa arimo jacayl ka ah
August 9, 2013 at 12:18 pm	Asc Marka hore ciid wngsn bahda caalamiga ah ee alcarabiya ahna horyaalka website ka caalamka
August 8, 2013 at 4:08 pm	Waaw marka hore ciid wanagsan dhaman bahda alcarabiya oo mar walbo farimahan qaaliga ah ino so diyariya waad mahadsantihin